Ahoana no fomba ahazoako miverin-dalana mankany amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny DoFollow?
Eto aho dia hiresaka aminareo mikasika fomba roa tena mahavariana hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao miaraka amin'ny DoFollow sy ny Rangoon High - toy ny nataoko izany volana maromaro lasa izay noho ny bilaogiko manokana. Eto ambany aho dia hamerina hijery ireo tetik'asa tsara indrindra hahazoam-bokotra sasantsasany - mamintina azy ireo avy amin'ireto toerana ireto: blôgy Squidoo, dot EDU tranonkala, ary tranonkala 2. 0 profiles. Na izany na tsy izany, dia mety ho azonao atao ny miverina any amin'ny tranokalanao fotsiny raha hijery ny tranonkala ho an'ny olona tapaka sasany hanamboatra azy ireo.
Blaogin'i 7p ity, ary Global Alexa Rank tonga 204 amin'ny 166). Izany no mahatonga ny fifandraisana amin'ny Squidoo dia mety ho tsara ho an'ny tranokalanao na blôginao. Mazava ho azy fa tsy asa mora akory ny miverina miverina any amin'ny tranokalanao avy amin'ny Squidoo. Saingy misy trangan-javatra nampiasako ho an'ny blôgiko manokana - hameno ny bar of Google ao amin'ny fikarohana fangatahana tahaka ny "ADD" plus "TO" plus "THIS" plus "LIST" plus "SITE: SQUIDOO. fr. "Raha manao izany ianao, dia haseho ny toerana rehetra azo atao ao amin'ny Squidoo izay ahafahanao mamihina amin'ny fampidirana lisitra, mametraka ny URLo izay mamaritra ny teny fanalahidinao ho an'ny teny fanalahidy, mba hahitana ny zava-drehetra - ary ny tanjona kendrenao.
Backlinks amin'ny fianarana
Fantatra tsara fa ny tranonkalan'ny EDU dia mety ho loharanom-baovao azo itokisana indrindra, amin'ny fomba fijerin'ny mpitady fikarohana toy ny Google. Raha ny fahitanao azy, raha toa ianao ka miverin-dalana mankany amin'ny tranokalanao ho an'ny tanjona voafetra, dia ho hita ho loharano azo antoka ihany koa ianao. Tsotra ny zava-drehetra - raha heverinao fa tsy ny tranokala EDU rehetra no manome fahafahana hamorona kaonty manokana ho an'ny fanehoan-kevitra, dia tsy maintsy manao fifanarahana amin'ny solaitrao ianao miaraka amin'ny kaonty fidirana mba ahazoana rohy avy amin'izy ireo.
Eny, manao zavatra izy ireo. Toy izany koa ny mombamomba azy rehetra! Ary maro ireo tranonkala samihafa 2. Loharanon-kevitra 0 ahafahana miverin-dalana mankany amin'ny tranokalanao, miaraka amin'i DoFollow manokana. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny handefa fomba fitakiana maimaim-poana, hamoronana ny mombamomba anao manokana ary hameno ny famaritana sy ny fizarana bio miaraka amin'ny piraofilinao. Ankoatr'ireo hafa, nahita an'i Flickr sy LinkedIn aho fa ireo no be mpanaraka indrindra.
Hamafisina ny rohy mifandraika
Raha efa niteny aho, dia afaka ny ho hendry ianao ka hahatonga ny ankamaroan'ny manam-pahefana efa misy backlinks. Ny zavatra dia tahaka ny olon-drehetra, ny tranonkala avo vaventy miaraka amin'ireo mpitsidika be dia be dia be matetika loatra. Toa tsy te hampiditra ny mpanjifany amin'ny 404s, na izay tsy misy ankehitriny, na tsy miasa intsony. Noho izany, afaka maimaim-poana ianao hangataka azy ireo hanolo ireo rindran-damba tapaka miaraka amin'ny safidy manokana anao maimaim-poana. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mitady rohy mifandray amin'ny fampitahana Chrome, na ireo fitaovana fanalahidy hafa fichier malalaka ho an'ny maimaim-poana, toy ny Open Site Explorer avy amin'i Moz, Analyzer amin'ny Semalt, na Scouting Frog SEO Spider Source .